အေးဂျင့် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ အေးဂျင့်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံစံ - CL-701
ဒီအေးဂျင့်(CL-701)ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်တီထွင်ထားသောဘက်စုံသုံးဆေးဆိုးဆေးရည်အေးဂျင့်ဖြစ်သည်.ဒီအေးဂျင့်(CL-701)Shihlin ဆိုးဆေးများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုလူစုခွဲရန်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သည်.ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်(CL-701)အေးဂျင့်ညှိ.အဆိုပါနည်းလမ်းသည်လက်ရှိစွန့်ကြဲပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်,ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရိုးရှင်းဖို့အေးဂျင့်နှင့်အက်ဆစ် leveling,အလွန်အမင်းယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်,နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.ဤအေးဂျင့်၏ကုသမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်အမှန်ပင်အလွန်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးနှင့်ထိရောက်သောအရန်များဖြစ်သည်.
ဤသည်အေးဂျင့်မျှသန့်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,အထူးသဖြင့် Shilin အတွက်နှင့်ဆိုးဆေးများကိုလူစုခွဲရန်.အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်အမျှင်များနှင့် Tedron အက်ဆစ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထိတွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်.
ယေဘုယျသောက်သုံးသော 1 ဖြစ်ပါတယ်~4% (အို.W.F)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/levelling-agent.html
အကောင်းဆုံး အေးဂျင့် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan